Save Burma | ပြည်သူတွေဆီမှာ လွတ်လပ်မှုနဲ့ တန်းတူညီမျှမှု အရင်ဆုံး ရှိနေမှ ဒီမိုကရေစီ စံနှုန်းရှိတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Release all political prisoners in Burma to buildagenuine democracy
ဧရာဝတီမြစ်နှင့် ချင်းတွင်းမြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက် ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများအား ပြည်ထောင်စုအစိုးရမှ ၀န်ကြီးဌာနလေးခုနှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှ ကော်မတီလေးရပ်တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရန် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း တိုက်တွန်းပြောကြား (Eleven Media Group မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။)
မည်သည့် ကန့်ကွက်မှုများ ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ စီမံကိန်းကို ဆက်လုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဘယ်တော့မှ နောက်ဆုတ်မည် မဟုတ်ကြောင်း အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအား ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဇော်မင်းပြောကြား (Eleven Media Group မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။)
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ကရင်နှင့် ရခိုင်တော်လှန်ရေး ၃၄ဦးအား တရားစီရင်ချက်ချ
ဗိုလ်မှူး အောင်လင်းထွဋ် ရေး- ၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲမှ ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲသို့
(၆၃) ကြိမ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ အထိမ်းအမှတ် စာတမ်းဖတ်ပြိုင်ပွဲ (ဂျပန်) ဖိတ်ခေါ်
အာဏာရူး မသမာသူ လူတစု၏ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုကြောင့် တိုင်းပြည် လွတ်လပ်ရေးအတွက် စွမးစွမ်းတမံ ဦးဆောင်ကြိုးပမ်းရင်း အသက်စွန့်လွှတ်ခဲ့ကြရသော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် ခေါင်းဆောင်ကြီးများအား မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှ အထူး ဝမ်းနည်း ကြေကွဲစွာဖြင့် ဂုဏ်ပြုသည့် အာဇာနည်နေ့မှာ ၆၃ ကြိမ်မြောက် ဖြစ်လာပါပြီ။
အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီးများ ဖြစ်ကြသော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း (၁၉၁၅ – ၁၉၄၇)၊ သခင်မြ (၁၈၉၇ – ၁၉၄၇)၊ ဒီးဒုတ် ဦးဘချို (၁၈၉၃ – ၁၉၄၇)၊ ဦးရာဇတ် (၁၈၉၈ – ၁၉၄၇)၊ မန်းဘခိုင် (၁၉ဝ၃ – ၁၉၄၇)၊ မိုင်းပွန်စော်ဘွား စပ်စံထွန်း (၁၉ဝ၇ – ၁၉၄၇)၊ ဦးဘဝင်း (၁၉ဝ၁ – ၁၉၄၇)၊ ဦးအုန်းမောင် (၁၉၁၃ – ၁၉၄၇)နှင့် ရဲဘော် ကိုထွေး (၁၉၂၉ – ၁၉၄၇) တို့အား လေးစားဂုဏ်ယူစွာ ဦးညွတ်အလေးပြုရင်း ဒေါ်မေလှမြိုင် သီဆိုသည့် “အလေးပြုပါတယ်” သီချင်းကို တဆင့်ကူးယူ ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
Source – http://nldlajb.blogspot.com/ Creator – ကိုသော်(ဂျပန်)
“ဒီမိုကရေစီ ဝါဒ၊ ဒီမိုကရေစီ စနစ်၊ ဒီမိုကရေစီ တရားတွေ ခေတ်စားနေတဲ့ ဒီကမ္ဘာကြီးမှာ ဒီမိုကရေစီ သဘောထား မထားနိုင်တဲ့နယ်ဟာ အနှေးနဲ့အမြန် အဲဒီနယ်မှာရှိတဲ့ လူတွေ နိုးကြားလာပြီး ဒီလို ကမ္ဘာကြီးမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ခေတ်သဘောတရားတွေနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်နေတဲ့ သဘောတရားတွေကို တွန်းလှန်ပစ်ကြမှာဘဲ ဆိုတာ ကျနော် နိမိတ်ဖတ်ထားချင်တယ်။”
၁၉၄၇ ဇွန်လ ၁၆ ရက်
တိုင်းပြုပြည်ပြုလွှတ်တော် အစည်းအဝေး (စတုတ္ထနေ့)
Part 1: International Tribunal (Japan) on Crimes against Women of Burma
ပြည်သူတွေက ရေငတ်နေတယ် ကြပ်ပြေးမှာ ဒီလိုရေတွေ ဖြုန်းနေတယ်
US envoy looks at Myanmar trip: officials
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်းမှတ်ပုံမတင်ရင် ပါတီပျက်ပြယ်သည်ဆိုတဲ့ ဥပဒေအား တားဝရမ်းထုတ်ပေးရန် တရားရုံးချုပ်သို့စာတင်…
When soldiers make big law; Burma vs. Kenya
ICC outlines Kenya probe plan
International Community Decries New Myanmar Election Laws
Myanmar Bars Democracy Advocate From Election
World focus on Burma (28-12-2009)
World focus on Burma (25-12-2009)
World focus on Burma (24-12-2009)
World focus on Burma (23-12-2009)
World focus on Burma (22-12-2009)
World focus on Burma (21-12-2009)
World focus on Burma (20-12-2009)
World focus on Burma (19-12-2009)
World focus on Burma (18-12-2009)
(ဗီဒီယို) လွတ်လပ်ရေး တိုက်ပွဲဝင် မြန်မာများ အိန္ဒိယမှာ ဘာကြောင့် အကျဉ်းချခံနေရသလဲ
World focus on Burma (17-12-2009)
World focus on Burma (16-12-2009)
World focus on Burma (15-12-2009)
World focus on Burma (14-12-2009)
World focus on Burma (13-12-2009)
World focus on Burma (12-12-2009)
World focus on Burma (10.12.2009)
World focus on Burma (9.12.2009)
World focus on Burma (8.12.2009)
World focus on Burma (7.12.2009)
‘Leech’ exposes Army’s dirty little secret (Article written by Josy Joseph on9March 2007) (လွတ်လပ်ရေး တိုက်ပွဲဝင် မြန်မာများ အန်ဒါမန်ကျွန်းစုတွင် အသတ်ခံရ၊ အဖမ်းခံရ၊ စွဲချက်မရှိပဲ ထိန်းသိမ်းခံနေရသော အမှုနှင့် ဆက်စပ်သည့် ဆောင်းပါး)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ချွင်းချက်မရှိ လွတ်မြောက်ရေး Chrysler film တောင်းဆို
World focus on Burma (6.12.2009)
World focus on Burma (5.12.2009)
World focus on Burma (4.12.2009)
World focus on Burma (3.12.2009)
World focus on Burma (2.12.2009)
World focus on Burma (1.12.2009)
ကာလကတ္တား တရားရုံးအတွင်းမှ ပင်လုံစိတ်ဓာတ် (လွတ်လပ်ရေး တိုက်ပွဲဝင် မြန်မာများ အန်ဒါမန်ကျွန်းစုတွင် အသတ်ခံရ၊ အဖမ်းခံရ၊ စွဲချက်မရှိပဲ ထိန်းသိမ်းခံနေရသောအမှုနှင့် ဆက်စပ်သည့် ဆောင်းပါး)
World focus on Burma (25-11-2009)
World focus on Burma (24-11-2009)
World focus on Burma (23-11-2009)
World focus on Burma (22-11-2009)
World focus on Burma (21-11-2009)
World focus on Burma (20-11-2009)
ဈေးကွက်စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု အရေးပါပုံ (ရေး- ကျော်ကျော်စိုး)
World focus on Burma (18-11-2009)
World focus on Burma (17-11-2009)
World focus on Burma (15-11-2009)
ပို့ဘလဲတွင် အကွက်ဆင်အဖမ်းခံရ မြန်မာများအမှု တရားဆိုင် သက်သေများ စတင်ထွက်ဆို
World focus on Burma (14-11-2009)
World focus on Burma (11-11-2009)
World focus on Burma (10-11-2009)
World focus on Burma (9-11-2009)
World focus on Burma (6-11-2009)
World top news on Burma (5-11-2009)
World focus on Burma (4-11-2009)
U.S. delegation holds talks with Burma’s Suu Kyi
World focus on Burma (3-11-2009)
World focus on Burma (2-11-2009)
အမျိုးသားရေးဆိုတာ အင်မတန်ကောင်းတယ်။ အမျိုးသားရေးဆိုတာ ကိုယ့်အမျိုးသားကို ကောင်းစားစေချင်တဲ့ စေတနာ မေတ္တာတွေ ကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ်လို့ တခြားအမျိုးသားကို ထိခိုက်စေတဲ့ဟာ၊ တခြားအမျိုးသားကို မုန်းတီးတာဟာ အမျိုးသားရေး မဟုတ်ဘူး
(တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော် ၁၀ ရက်နေ့ဖြစ်ပြီး ၈၉ နှစ်မြောက် အမျိုးသားနေ့)
“There isaplan to release her soon … so she can organise her party,” Min Lwin,adirector-general in the foreign ministry, in Manila forameeting of the Association of Southeast Asian Nations (Asean) and the US, told the Associated Press.
Aung San Suu Kyi (C) arrives forameeting with U.S. Assistant Secretary of State for East Asian and Pacific Affairs Kurt Campbell (L) at the Inya Lake Hotel in Yangon November 4, 2009. A delegation of senior U.S. officials, pursuinganew dialogue, met with Myanmar’s military rulers on Tuesday in the highest-level talks with the reclusive junta in 14 years. The move by President Barack Obama’s administration to engage the junta appeared focused on pushing for free and fair elections next year, although analysts said the rapprochement was as much about geopolitics and the growing regional influence of China.
I know that throughout history the Nobel Peace Prize has not just been used to honor specific achievements, it has also been used to give momentum toaset of causes.
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး(သန်းရွှေ) က ဒီလောက်စွမ်းတဲ့ အာဏာတွေ ပါဝါတွေကို ခါးမှာပဲချိတ်ထားတယ်။ နိုင်ငံတော်နဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် အဲဒါကို ခေါင်းထဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ နှလုံးသားထဲကိုဖြစ်ဖြစ် သွင်းလိုက်ရင် အရမ်းကောင်းသွားမှာပဲလို့ ပြောချင်တယ်။
Posted by komyint74 on YouTube
AIPMC Birthday Message for Daw Aung San Suu Kyi on her 64th birthday
Indian Parliament Calls for Aung San Suu Kyi s Release
衆議院議員、元首相　羽田　孜　Tsutomu Hata, MP, Former Prime Minister of Japan (Japan) wrote 64 words: ア ウンサンスーチーさんの長期に渡る拘束に、強く反対します。スーチーさんの自由と健康を祈念します。I strongly protest the extended detention of Daw Aung San Suu Kyi. I pray for the freedom and good health of Daw Aung San Suu Kyi.
Paul McCartney (United Kingdom) wrote 64 words: Aung San Suu Kyi is an inspiration to her country and the rest of the world. I truly admire her infallible resolve and her determination to stand up for what she believes in. It is vital that Aung San Suu Kyi is released so that she can govern the people who elected her and give Burma back the freedom we all take for granted
Sec. Madeleine Albright, Drew Barrymore, David Beckham, Sandra Bullock, Daniel Craig wrote 64 words: Nineteen years ago, the Burmese people chose Aung San Suu Kyi as their next leader. For most of those 19 years she has been kept under house arrest by the military junta that runs the country. We must not stand by as she is silenced again. Now is the time for the international community to speak with one voice: Free Aung San Suu Kyi.
Bono, U2 wrote 64 words: Packingasuitcase foraplace none of us has been/A place that has to be believed to be seen/You could have flown away/A singing bird in an open cage/Who will only fly, fly for freedom/Walk on, walk on/What you’ve got they can’t deny it/Can’t sell it, can’t buy it/Walk on, walk on/Stay safe tonight.
Yoko Ono wrote 64 words: Your heart beats with my heart. My eyes see what you see. My belief is your belief. And my life is connected to thousands of universes, as is yours. Every twinkle of the star must travel billions of years to be seen by us. But our minds do not have to travel at all to be seen by each other. Because we are altogether.
Women Nobel Peace Laureates, Mairead Maguire (1976), Betty Williams (1976), Rigoberta Menchú Tum (1992), Jody Williams (1997), Shirin Ebadi (2003), and Wangari Maathai (2004) wrote 64 words: We, your sister Nobel Peace Laureates, stand with you and call on the governments of the world to demand your immediate release. Detained against Burma’s own laws, your imprisonment and trial areastark illustration of the brutality and lawlessness of the Burmese military regime, which holds over 2000 democracy activists in prison. We look forward toaday when you are finally free.
Lwin Aung Soe (Japan) wrote 64 words: Happy Birthday, Daw Suu. We have been long expecting for Burma’s democratization. We wish you to be released immediately, too. Like the difference of black and white, you are sharply contrast to Burmese dictatorial regime who are repressive but you are no doubtademocracy icon. It is great the whole world supports you firmly and never forgets you and our country. Good Luck!
The pressure on the Burmese junta since Aung San Suu Kyi’s trial began more than two weeks ago has given the democratic opposition more “breathing space.”
Win Tin,aprominent member of her National League for Democracy (NLD)
“I have no guilt as I didn’t commit any crime.”
Aung San Suu Kyi ( during the trial on 22-5-2009)
-Barack Obama (2007)
-George W. Bush (2005)
“Our world is becoming slightly more human, more caring,” he said, citing the fall of Nazism, fascism and Soviet Communism. “Human rights are accepted as universally normal. Even the worst dictator does not stand up and blatantly say, ‘I violate human rights and I’m proud of it!’”
From Burmese Community in Tokyo, Japan, 2-5-2009
“ယနေ့လို အမျိုးသားသွေးစည်းညီညွတ်ရေး လိုအပ်နေဆုံး အချိန်မျိုးမှာ ဘာပဲပြောပြော အမျိုးသား သွေးစည်းညီညွတ်ရေး အတွက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး အဖြေရှာပြီးတော့ အချင်းချင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရေးကိုသာ အန်ကယ်တို့ တစိုက်မတ်မတ် ပြောနေတာပါ။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာ ဒီမိုကရေစီနည်းကျတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ မဟုတ်ဘူး၊ ရေးဆွဲထားတဲ့ ပုံစံ လည်း သဘောမကျဘူး၊ နောက်တခုက ဆန္ဒခံယူပွဲကိုလည်း ဖြစ်သလို တက်သုတ်ရိုက်ပြီးတော့ ပြည်သူတွေကို လေ့လာခွင့် မပေးဘဲ လုပ်သွားတာ၊ ဒါ အန်ကယ်တို့အနေနဲ့ လက်မခံနိုင်ဘူးလို့ ကြေညာချက်ပါထုတ်ပြီးတော့ အတိအလင်း ပြောထားပြီး သားပါ။
ဗိုလ်မင်းလွင် (၀ါရင့် နိုင်ငံရေးသမားကြီးများအဖွဲ့ တော်လှန်ရေးနေ့ မိတ်ဆုံစားပွဲ ၂၇-၃-၂ဝဝ၉)
Snr.General Than Shwe Rated World’s 4th Worst Dictator
Fourth was Burmese junta leader Than Shwe . He has been denounced by the international community for delaying access of relief workers to flood-devastated areas in May last year, when 140,000 people were killed or went missing and more than2million people were displaced in the aftermath of Cyclone Nargis. He ranked third in 2008.
List of the world’s worst dictators in the Washington Post’s weekend magazine Parade, after analyzing their human rights abuses and the intensity of their absolute power based on data from the U.S. State Department, Human Rights Watch, Amnesty International, and Reporters Without Borders.
“သူတို့ (လူထုကို ဆိုလိုသည်) ရဲ့ အားပေးထောက်ခံမှု၊ မှန်ကန်စွာ ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု၊ လူထုရဲ့ အသိဉာဏ် ရှိဖို့ လူထုရဲ့ စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုဟာ အင်မတန် အရေးကြီးပါတယ်။”
သခင်မကြီး ဒေါ်လှကြည် ခေါ် စာရေးဆရာမကြီး ယုဝတီကြည်ဦး
“The legal system (in Burma) isatool of the state – the military government uses the law and courts and judges to crack down on political dissidents.”
David Mathieson, Myanmar consultant for Human Rights Watch
“We hope Myanmar will seize this moment to take bolder steps towards national reconciliation and in engaging the international community.”
Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong told his Myanmar counterpart Thein Sein
There are 2,131 political prisoners in Myanmar, including 15 members of Parliament, 229 students, 220 monks, 47 members of the movement “88 Generation Students,” and 456 representatives of the NLD. From August 21, 2007 – the beginning of the “saffron revolution” promoted by the Burmese monks – until March 12, 2009, the military has arrested 1,055 protest participants, including 147 monks; another 110 are on trial at the moment, 446 have been sentenced to prison, and there are 19 detained in the labor camps.
It may be that the U.S. review can lead to smarter and more targeted sanctions, with better coordination among allies and neighbors. Certainly, we hope that Ms. Clinton will make clear to Burma’s government that the United States could never ease sanctions without first conducting full and free consultations with Aung San Suu Kyi, Burma’s rightful ruler. Aung San Suu Kyi’s party overwhelmingly won an election in 1990, but the junta ignored the results and has kept her isolated and under house arrest for most of the time since. Her release, and that of thousands of other political prisoners — and their families — remains essential.
The Washington Post Editorial – Burma’s bullies
Release more than 2,100 political prisoners and allow them to take part in an election set for 2010.
Halt its use of civilians in forced labour.
“I cannot discuss the situation of prisoners of conscience in Myanmar and not mention the harsh sentences delivered by prison courts. During the period between October and December 2008, some 400 prisoners of conscience were given sentences, ranging from 24 years to 65 years of imprisonment. In January 2009,amember of All Burma Federation of Student Union, in his early 20s, was sentenced to 104 years of imprisonment.”
Tomas Ojea Quintana, the UN’s special rapporteur on human rights in Myanmar, called on and urged Myanmar’s ruling generals.
“There are no prisoners of conscience in Myanmar,” he said. “In fact, these are only individuals who are serving the prison terms for breaking the laws in Myanmar.”
Wunna Maung Lwin, Burmese Ambassador to the United Nations.
We cannot finance companies that support the military dictatorship in Burma through the sale of military materials.
(Norway) Finance Minister Kristin Halvorsen
မြန်မာနိုင်ငံသားတွေက ထောင်ထဲမှာ နေရမှ အကျဉ်းသား မဟုတ်ဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ နေရတာကိုက ထောင်ကျနေသလိုပဲ။
ဝေနှင်းပွင့်သုန် ( ၈၈ မျိုးဆက်သစ်ကျောင်းသား ကိုမြအေး၏ သမီး)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အာဏာရှင် မဟုတ်၊ လူထုထောက်ခံမှုရသော ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဖြစ်သည်
“ဒေါ်စုဟာ အာဏာရှင်သဘောမျိုး ဖြစ်တယ်ဆိုရင် ဘာဖြစ်လို့ ဒီနေ့ သူ့နောက်မှာ လူတွေက အပြည့်အဝ ရှိနေလဲ။ သူက အာဏာရှိတာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီမိုကရေစီအတွက် သူ့နောက်မှာ အလုံးအခဲတွေ ရှိနေတာပေါ့”
“We believe that the US will keep up its support for human rights and the democracy movement in Burma.”
U Nyan Win, spokesman for the National League for Democracy (NLD)
”Act decisively in the interest of the nation and the people”
General Aung San (Independence Hero in Burma)
“ကနေ့ တိုင်းရင်းသားပြည်သူများ အနေအထားဟာ တမျိုးသားလုံး သွေးစည်းညီညွတ်ရေး မဖြစ်နေ တည်ဆောက်မှ ဖြစ်မယ်ဆိုတာကို ကျနော်ပြောချင်ပါတယ်။ အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး တည်ဆောက်ရာမှာလဲ ဆရာကြီး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း ချမှတ်ပေးခဲ့တဲ့ သူမနာ ကိုယ်မနာ တွေ့ဆုံဖြေရှင်းကြသည့် နည်းသာလျှင် တခုတည်းသော နည်းလမ်းဖြစ်တယ် ဆိုတာ ကျနော် ထပ်လောင်း ပြောလိုပါတယ်”
(Dr Zaw Myint Maung, MP of the 1990 elections in Amarapura, Mandalay, still 18 years in the Burmese regime’s prison cells)
After 18 years in hellish prison, he was finally released together with other 6312 prisoners on 21-2-2009 in amnesty.
သမိုင်းကိုဖျောက်လို့ မရဘူး။ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်း အန်တီတို့မြို့မှာ အဖွဲ့ချုပ်ရုံးက ပိတ်ထားရပေမယ့် ရုံးမှာ ဆိုင်းဘုတ်ကြီး ကပ်ထားတယ် – “အခြေခံ လူ့အခွင့်အရေးကို အာမခံတဲ့ အစိုးရတရပ် ပေါ်ထွန်းရေးသည် အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက် ဖြစ်သည်”ဒါကြောင့်မို့လို့ ဘယ်သောအခါမှ အာဏာရှင်စနစ်ကို ပြန်လည် မပေါ်ထွန်းအောင်၊ အခြေခံ လူ့အခွင့်အရေး အာမခံတဲ့ အစိုးရတွေ ပေါ်ထွန်းအောင် လုပ်ဖို့က အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက် ဖြစ်သလို ကျမတို့ကလည်း ဒီရည်ရွယ်ချက်အတိုင်း လုပ်နေတာ။ကော်မရှင်အဖွဲ့နဲ့ ကျမတို့ကို တွေ့ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့် ကော်မရှင်အဖွဲ့အနေနဲ့ ကျမတို့ကို ဒီနေ့ထိ ခေါ်ခေါ်တွေ့နေတာကိုက ၉ဝ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲကို အသိအမှတ်ပြုနေတယ်။ ၉ဝ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲကြောင့် ကျမတို့ပါတီကလည်း အသက်ရှင်လျက် ရှိတယ်ဆိုတာ သက်သေပြတဲ့အနေနဲ့ ကော်မရှင်အနေနဲ့ ဖိတ်ခေါ်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
2009 Title Pages
2008 Title Pages
Save Burma Visit Site
Little Myanmar Opens With Burmese Street Food - Grub Street May 24, 2022
Please Don’t Call Myanmar Military Tatmadaw - The Irrawaddy May 25, 2022
Former Burmese refugee now teaching immigrant students at Southport High School - WTHR May 24, 2022
Myanmar poets speak out from the front lines of protest - Nikkei Asia May 19, 2022
14 bodies found washed up on Myanmar beach - Burma News International May 24, 2022
Myanmar junta begins talks with ethnic armed groups - Burma News International May 23, 2022
Is the US Senate Republican leader genuine about his support for Burma? - Frontier Myanmar May 5, 2022
Fear Rising Among Myanmar Military Elite - The Irrawaddy May 3, 2022
Myanmar Junta Weakening: Karen Rebels - The Irrawaddy May 24, 2022
How the Karen became crucial to Myanmar’s anti-coup resistance - Al Jazeera English May 6, 2022
Burma/Myanmar – France condemns the latest prison sentence handed down against State Counselor Aung San Suu Kyi (27 Apr. 2022) - France Diplomatie April 27, 2022
Tracing the Rise of NYC's Current Burmese Food Boom - Eater NY April 27, 2022
2021 sees record numbers displaced globally and in Myanmar - Burma News International May 20, 2022
Myanmar Junta Burn Over 1,300 Houses in Four Days in Northwest - The Irrawaddy May 5, 2022
Burmese Workers Entering Thailand Under MOU System, Paying More than Double - Karen News May 23, 2022
Ex-Myanmar Military Officers to Head Press and Literary Bodies - The Irrawaddy May 25, 2022
Thai Prisons Crowded with Illegal Myanmar Migrants - The Irrawaddy May 23, 2022
Russia Is Causing Bloodshed in Burma, Too - Progressive.org April 25, 2022
‘We Need Guns,’ Myanmar Resistance Forces Tell Shadow Govt - The Irrawaddy May 24, 2022
Myanmar Junta Tightens Security in Commercial Capital Yangon - The Irrawaddy May 18, 2022
အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2022-05-25 01:01 May 25, 2022
အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2022-05-24 13:01 May 24, 2022
အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2022-05-24 01:01 May 24, 2022
အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2022-05-23 13:01 May 23, 2022
အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2022-05-23 01:01 May 23, 2022
အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2022-05-22 13:01 May 22, 2022
အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2022-05-22 01:01 May 22, 2022
အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2022-05-21 13:01 May 21, 2022
အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2022-05-21 01:01 May 21, 2022
အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2022-05-20 13:01 May 20, 2022
One of the three missiles North Korea tested presumed to be an ICBM, South Korea says May 25, 2022
Indian man jailed for 10 years over wife's 'dowry death' May 25, 2022
Police raid leaves at least 22 dead in Rio de Janeiro May 25, 2022
A new billionaire has been minted nearly every day during the pandemic May 23, 2022